China FPGA High-Speed ​​Circuit Board Assembly Nrụpụta na Factory | KAISHENG PCB
Ugbo ala Control Circuit Board Assembly
Mbadamba ụrọ PC Turnkey PCB Kọmputa
Controllọ Ọrụ Nchịkwa Industriallọ Ọrụ Industriallọ Ọrụ
Ems PCB Mgbakọ
Njikwa Board biri ebi Circuit Assembly
Circuit Card Assyria
Low Cost PCB Printing Na Assembly Manufacturers ...
China Cheap PCB Manufacturing With Components Compan ...
PCBFuture bụ PCB rụpụta na PCB Assembly Company. N'ihe karịrị afọ 20 nke ọmarịcha ịdị mma, talent na klaasị ụwa na ọhụụ ọhụụ, PCBFuture abịawo ogologo oge iji bụrụ otu n'ime ndị na-emepụta PCB ndị China na ndị na-emepụta ngwaahịa taa. Anyị ilekwasị anya na-elu-edu na aku na uba viable usoro jikọtara na-ekwekọghị agbanwe agbanwe emewo ka anyị na ike nke nhọrọ nile China.
Mkpuchi ọla: Nickel Electrolytic / Gold siri ike na Gold na-ahọrọ
Na ọnọdụ nke Production: SMT +
N'ígwé: 12 Layer PCB
Isi ihe: FR-4 + RO4003C
Ihe mkpuchi ọla: Nickel Electrolytic / Gold siri ike na ọla edo Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 12 Layer PCB
Isi ihe: FR-4 + RO4003C Asambodo: SGS, ISO, RoHS MOQ: Mba MOQ
Dị derdị Solder: Free-Free (RoHS Dabara) One-Kwụsị Services: PCB Manufacturing Ma Turnkey PCB nzukọ Ule: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Nkwado Teknụzụ: DFM efu (Kere maka Nrụpụta) Lelee Ofdị Mgbakọ: SMT, THD, DIP, Mixed Technology PCBA Ọkọlọtọ: IPC-a-610d
PCB na PCBA Ajụjụuick Tonwa PCB Assembling
Keywords: PCB Assembly, PCB rụpụta, PCB Population, PCB Assembly Manufacturers, PCB Assembly Cost, Chebe PCB Assembly, Mbipụta Circuit Board Assembly Cirlọ ọrụ
1. Ike nkwa
SMT omumuihe: anyị dị pụrụ isi chọta igwe na multiple ngwa anya nnyocha akụrụngwa, nke nwere ike na-emepụta 4 nde ihe kwa ụbọchị. Akwadoro usoro ọ bụla na ndị ọrụ QC iji kwado ogo ngwaahịa.
DIP mmepụta akara: E nwere igwe ikuku ịgbagharị abụọ. Ndị ọrụ ahụ maara ihe ọ bụla na ịgbado ọkụ dị iche iche.
2. Nkwenye dị mma, arụmọrụ dị elu
High-ọgwụgwụ akụrụngwa ike Tapawa nkenke ekara akụkụ, BGA, QFN, 0201 ihe. Enwere ike iji ya dị ka ihe nlere maka ntinye akwụkwọ na ntinye nke nnukwu ihe. Enwere ike ịmepụta ihe abụọ na obere na obere ogbe.
3. Rich ahụmahụ na SMT na soldering nke electronic ngwaahịa, anụ nnyefe
Nye ọrụ gbakọbara maka ọtụtụ puku ụlọ ọrụ eletrọniki, metụtara ọrụ nhazi ọrụ SMT maka ụdị ngwa akụrụngwa dị iche iche na njikwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a na Europe na United States Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie ga-ekwenyekwa na ọ dị mma.
A ga-ewepụta ihe ndị ahụ n'oge n'ime ụbọchị 3-5 mgbe emechara ya, ma ọ bụ ha nwere ike nyefere ha n'otu ụbọchị.
4. Ike mmezi ike na zuru okè mgbe-sales ọrụ
Injinia mmezi nwere ahụmịhe bara ụba ma nwee ike ịrụkwa ngwaahịa ndị nwere nkwarụ kpatara site na ịgbado ọkụ dị iche iche, anyị nwere ike hụ na ọnụego njikọ nke bọọdụ sekit ọ bụla.
Ndị ahịa ndị ahịa ga-azaghachi n'oge ọ bụla n'ime awa 24 ma dozie usoro gị ozugbo enwere ike.
Usoro mmepụta PCBA:
SMT patch nhazi
DIP nkwụnye nhazi
Emechara ngwaahịa nzukọ
The uru nke ulo oru akara osisi PCBA foundry ihe onwunwe nke PCBFuture:
Obere nzụta ego. Anyị nwere ndị ọrụ ịzụ ahịa ọkachamara bụ ndị maara nke ọma na ngwa elektrọnik ma nwee mmekọrịta ogologo oge yana ọwa ahịa nnweta dị elu na ntụkwasị obi. Ọ bụ ihu ọma nweta efu ihe MOQ-akwụ ụgwọ.
Belata ụgwọ ọrụ, anyị kwadebere ya na ngwa eletrọniki, ndị injinia elektrọnik, ihe elektrọnik na akụkụ IQC, ndị ahịa achọghị ịhazi.
Iji belata ọnụ ahịa ihe onwunwe, anyị nwere ọtụtụ ngwa elektrọnik nyocha, ndị ahịa achọghị ịhazi.
Mee ka ọnụahịa nkwukọrịta belata nke ukwuu, ndị ahịa achọghị ibupute ọtụtụ ndị na-eweta ngwongwo akụrụngwa, anyị ga-enyere ha aka mezue ọrụ ahụ.
Ọrụ doro anya. Ọ bụrụ na enwere nsogbu, onye ahịa ekwesịghị ikpebi ma ọ bụ nsogbu akụrụngwa ma ọ bụ nsogbu usoro nrụpụta. Anyị bụ ndị zuru ezu ọrụ.
PCBFuture bụ onye na-emepụta PCBA OEM nke nwere ike inye ndị ahịa ngwaahịa PCB ọkachamara, ịzụta ihe, PCBA na-akwụsị ngwa ngwa na ọrụ ndị ọzọ dị elu na ndị ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ jụọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụsales@pcbfuture.com , anyị ga-aza gị ASAP.
Nke gara aga: Ọrụ Mgbanwe Flex PCB
Osote: Controllọ Ọrụ Nchịkwa Industriallọ Ọrụ Industriallọ Ọrụ
Chikọtara E Bipụtara Circuit Boards
nzukọ ndị nlekọta sekit
Ọrụ Mgbakọ Circuit Board
Circuit Board Manufacturing ieslọ ọrụ
Ọrụ Circuit Board
Mgbakọ Card Circuit
Kọmputa Circuit Assembly
Nzukọ Flex Circuit
Mbipụta Circuit Assembly
e biri ebi nzukọ sekit
Mbipụta Circuit Board Assembly Cirlọ ọrụ
E Bipụtara Circuit Board Assembly Manufacturer
Ọrụ Ndị Mgbakọ Circuit Board
Smart njikwa Board Electronics Assembly Ser ...
Mgbakọ nzukọ nchịkwa
Mbipụta Wiring Assembly